7 ịtụnanya ebe na Slovenia | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Getaways Europe, Slovenia, General, Ihe ị ga-ahụ
Slovenia nwere ike ọ gaghị abụ otu ebe kachasị ewu ewu maka ụlọ ọrụ njem, mana ọ na-ezo karịa ihe anyị tụrụ anya ya. Caves nke ihe ịtụnanya dị ịtụnanya, obodo ndị dị n’akụkụ mmiri na ndị ọzọ nọ n’ugwu, ha niile nwere ọmarịcha amara ha, ụlọ ochie ochie mara mma na oghere okike ndị yiri ka anapụrụ ha n’ebe echiche efu dị. Ihe a niile kpatara karịa iji tụlee a ezigbo njem gaa slovenia, na-achọpụta isi ihe na-adọrọ mmasị.
Oge a anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime akụkụ kasị ịtụnanya na ịtụnanya dị na Slovenia, obodo nwere ọtụtụ ọdịiche na obodo ndị mara mma bụ ndị mara mma na oge ọ bụla n'afọ. Ya mere, dee ebe niile ndị a dị ịtụnanya ka ị ghara ichefu ihe ọ bụla na njem gị na Slovenia.
1 Ljubljana, isi obodo
2 Snow na Kranjska Gora
3 Agwaetiti nwere ụka na Bled
4 Obodo ochie na Ptuj
5 Ọwa mmiri dị n'okpuru ala na Skocjan Caves
6 Redlọ Predjama n'ime ọgba
7 Ndagwurugwu dị egwu nke Soca
Ljubljana, isi obodo
Akụkọ banyere obodo a na-agwa anyị na ebe Jason na Argonauts gburu otu nnukwu anụ mmiri na apiti mmiri. Ihe nnọchianya nke obodo bụ dragọn, ị nwere ike ịhụ ha mgbe ụfọdụ na ihe owuwu ya. Na mgbakwunye, ụdị baroque wakporo ọtụtụ ụlọ na obere obodo. Otu n'ime nleta dị mkpa, na mgbakwunye na ọwa mmiri, bụ Nnukwu ụlọ nke Lubliana, emi odude ke enyọn̄ obot emi enyenede n̄kpọ emi ẹsikamade. The echiche site na nke a mara mma ochie nnukwu ụlọ bụ ikpọ, ezigbo ebe ịchọpụta isi obodo na ya ochie obodo. Wuru na 1144, ọ fọrọ nke nta ka emezigharị ya na narị afọ nke XNUMX. Nke kachasị mma, nleta gị bụ n'efu.
Snow na Kranjska Gora
Obodo nta a dị na ndagwurugwu nke Osimiri Sava, ọ bụkwa otu n'ime ụzọ mbata nke ọtụtụ ugwu na ugwu ugwu gafere, nke bụ ya mere ọ ji bụrụ obodo na-eme njem nlegharị anya, nke nwere mpaghara ọhụụ toro ngwa ngwa iji nye ndị niile ga-eme egwuregwu snow n'oge oge oyi. Na nso nso anyị nwekwara ike ịga na ọdụ Zelenci ma ọ bụ gaa njem na Kepa.
Agwaetiti nwere ụka na Bled
Bled bụ otu ihe nnukwu ọdọ mmiri nwere obere agwaetiti nke ulo uka di na ya. I lee foto ha anya, ị gha amata ihe anyị na-ekwu. Ọdọ a dị n’akụkụ ụkwụ Julian Alps, ọ bụkwa ọdọ mmiri nwere nnukwu ice. Ọ bụ ọdọ mmiri mara ezigbo mma, mana ihe mere ya pụrụ iche bụ obere agwaetiti ya, ebe anyị nwere ike ịhụ ụlọ ụka ochie. Iji ruo ebe ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ otu n'ime gondolas ma ọ bụ ụgbọ mmiri ndị na-ebufe ndị otu. Mgbe anyi rutere agwaetiti a, anyị ga-arịgo steepụ 99 iji ruo ụka mara mma. N'aka nke ọzọ, ebe nlegharị anya ọzọ nke Bled bụ nnukwu ụlọ ya, n'elu ugwu. Site na nnukwu ụlọ e nwere echiche ndị mara mma, yana ihe omume na ihe ngosi na ndụ mgbe ochie na Bled.
Obodo ochie na Ptuj
Obodo a dị n'akụkụ Osimiri Drava dị na nke a mmezi ebe Nkume Age. N'ime obodo a, anyị nwere ike ịga leta nnukwu ụlọ nke narị afọ nke XNUMX, nke ụlọ ndị mara mma gbara ya gburugburu. Ọ bụ obodo jupụtara n’akụkọ ihe mere eme na akụkụ ya ndị mara mma, mana ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya, ebe ọ bụ na gburugburu anyị ga-ahụ oke ọhịa na ubi vaịn.
Ọwa mmiri dị n'okpuru ala na Skocjan Caves
Ọgba ndị a bụ naanị ebe ekwupụtala Ihe Nketa Uwa na Slovenia dum, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe ndị dị mkpa ịga leta. Ha dị ọtụtụ nde afọ, ma biri na mgbe ochie tupu e biri ha. E nwere kilomita isii n’okporo ụzọ, ọ bụ ezie na ndị njem na-eme ihe dị ka kilomita atọ. Ihe ndị anyị nwere ike ịhụ bụ okporo ụzọ ndị na-enwu enwu, usoro okwute ndị na-enweghị atụ na àkwà mmiri nke dị mita 47 n’elu osimiri ahụ. Anyị ga-akwụsị na usoro nke yiri ka ọ na-emepụta akụkụ okike, otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị ya.
Redlọ Predjama n'ime ọgba
Na Slovenia anyị nwere ike ịchọta imirikiti ụlọ na obodo ochie ya, mana otu n’ime ama ama n’obodo a bụ Predjama Castle, maka na wuru ya n’ime ọgba. Ọ nọ n’elu ugwu ma yie ka o si n’ọgba ahụ pụta. Ọ bụ kwuru na Baron Erazem Luegger Ọ zuru ndị ọgaranya zuru ohi iji nye ndị ogbenye, ma mgbe mwakpo ahụ gasịrị, ọ zoro n'ọgba ya. Nwere ike ịga na-enwe dungeons ma ọ bụ ebe a hụrụ na ọgba mbụ.
Ndagwurugwu dị egwu nke Soca
Osimiri Soca a na-apụta maka inwe ụda turquoise dị egwu, agba dị oke egwu nke na-eme ka ọ dị ka osimiri efu. Osimiri akụkụ nke Ogige Nature Triglav. Mgbe ị gachara ileta obere obodo ndị a niile, nke a bụ ezigbo ebe izu ike na okike, nwere ụzọ ije ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya. Anyị na-ahụkwa obere obodo ndị dị ka Kobarid ma ọ bụ Bovec n'ime ọwa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » 7 ịrịba ebe ke Slovenia